Natural Antibacterial Agent Lactoperoxidase: Basa, Sisitimu, Kushanda & Kudzivirirwa Shangke Chemical
Tonga SYNEPHRINE HCL POWDER
Tonga LORCASERIN POWDER
DZAMISA LORCASERIN HCL POWDER
Tonga ORLISTAT POWDER
Onyama yehorosi (Safflower seed oil) 83%
Natural Antibacterial Agent Lactoperoxidase: Basa, Sisitimu, Kushandiswa & Kachengeteka
Lactoperoxidase pamusoro pekutarisa
Lactoperoxidase (LPO), iyo inowanikwa mumasavary uye mammary gland, chinhu chakakosha chekupindura kwekudzivirira kwakakosha pakuchengetedza hutano hwakanaka hwemuromo. Basa rinonyanya kukosha re lactoperoxidase ndeye oxidize thiocyanate ions (SCN−) inowanikwa mumarara mune hydrogen peroxide zvichikonzera zvigadzirwa zvinoratidza antimicrobial basa. LPO yakawanikwa mukaka yebovine yakaiswa muindasitiri yekurapa, yechikafu, uye yemafuta ezvibereko nekuda kwekushanda kwayo uye kurongeka kwakafanana neiyo enzyme yemunhu.
Zvigadzirwa zvemazuva ano zvehutsanana hwemuromo zviri kuvandudzwa ne lactoperoxidase system yekupa imwe yakanakisa kune yakajairwa fluoride mazino. Nekuda kwekushandisa kwakakura kwe lactoperoxidase inowedzera, kudiwa kwayo kwawedzera zvakanyanya mumakore, uye kuchiri kukura.
Chii chinonzi Lactoperoxidase?
Lactoperoxidase inongova iyo peroxidase enzyme inogadzirwa kubva mucosal, mammary, uye salivary glands, inoshanda semusikirwo anti-bhakitiriya mumiriri. Muvanhu, iyo lactoperoxidase enzyme yakavharidzirwa neLPO gene. Iyi enzyme inowanzo kuwanikwa mumamalia, kusanganisira vanhu, makonzo, bovine, ngamera, buffalo, mombe, mbudzi, Ilama, uye gwai.
LPO inoshanda kwazvo antimicrobial mumiriri. Lactoperoxidase inoshandisa, saka, yakavakirwa pachinhu ichi. Lactoperoxidase application iripo inowanikwa kunyanya mukuchengetedza chikafu, ophthalmic mhinduro, uye zvinangwa zvehunyoro. Zvakare, lactoperoxidase poda yakashandiswa mukurapa uye nekurapa kwemazino. Uyezve, LPO inoshanda inorwisa-hutachiona uye inodzivirira-bundu mumiriri. Kukurukurwa pazasi mamwe lactoperoxidase anoshandisa:
i. Kansa yepabonde
Lactoperoxidase kenza kugona kwekutungamira kunosanganiswa nekukwanisa kwayo oxidize estradiol. Iyi oxidation inotungamira kune oxidative kusagadzikana mumasero ekenza yemazamu. Lactoperoxidase basa pano ndere kukonzera ketani yekuchinja inotungamira kunwiwa kweokisijeni uye kuunganidzwa kwe intracellular hydrogen peroxide. Nekuda kwekuita uku, LPO zvinobudirira inouraya tumor cell mu vitro. Zvakare, macrophages akaoneswa LPO anogadziriswa kuti aparadze cancer maseru, achivauraya.
ii. Anti-bhakitiriya maitiro
Iyo LPO enzyme inoshanda senge zvisikwa zvisingaite zvemuviri zvisina kuchengetedza biological immune system yemamalia uye inodzora iyo oxidation ye thiocyanate ion mune antibacterial hypothiocyanate. LPO inogona kutadzisa kukura kwehuwandu hwakawanda hwehutachiona kuburikidza ne enzymatic reaction iyo inosanganisira thiocyanate ions uye hydrogen peroxide semacofactors. Antimicrobial basa yeLPO inosimbiswa pakuumbwa kweiyo hypothiocyanite ions kuburikidza nekugadziriswa kweanoproduct. Hypothiocyanite ions inokwanisa kuita nemabhakitiriya membrane. Dzinokonzerawo kukanganisa mumashandiro emamwe metabolic enzymes. Lactoperoxidase inouraya mabhakitiriya eGram-isina kunaka uye inodzivirira kukura nekuvandudzwa kweGram-hutachiona hwakanaka.
III. Lactoperoxidase mune cosmetics
Kubatanidzwa kwe lactoperoxidase poda, glucose, thiocyanate, iodide,
uye glucose oxidase, uye inozivikanwa kuva inoshanda mukuchengetedza kwezvibodzwa.
Iv. Lactoperoxidase mumukaka Kuchengetedzwa
Iko kugona kwe lactoperoxidase mukuchengetedza kweiyo yakachena mhando yemukaka wakasviba kwenguva yakapihwa yakatangwa muminda yakati wandei uye ongororo dzekuitisa kunoitwa munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo. Lactoperoxidase inochengetedza inogona kushandiswa kuchengetedza mukaka wakasvinwa unowanikwa kubva kumarudzi akasiyana. Kubudirira kwemaitiro acho kunoenderana nezvinhu zvakati wandei. Izvi zvinhu zvinosanganisira kupisa kwemukaka panguva yekurapwa, mhando yehutachiona hwehutachiona, uye huwandu hwemukaka.
Lactoperoxidase inopa bacteriostatic mhedzisiro mukaka wakakora mukaka wakasviba. Tsvagurudzo yedata uye ruzivo kubva pane chaihwo hunhu hunoratidza kuti lactoperoxidase inogona kushandiswa kudarika kupisa miganho ye (15-30 degrees Celsius) inotaurwa mune codex nhungamiro ya 1991. Pakupera kwemazinga ekupisa, zvidzidzo zvakasiyana zvinoratidza kuti activation ye lactoperoxidase inogona kunonoka psychrotrophic mukaka webhakitiriya kukura uye nokudaro kunonoka kupora kwemukaka kwemamwe mazuva uchienzaniswa nefriji chete. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti chinangwa chekushandisa lactoperoxidase hachisi chekuita kuti mukaka uve wakachengeteka kuti unwe asi kuchengetedza iwo chaiwo iwo mhando.
Kudzidzira hutsanana hwakanaka mukugadzira mukaka kwakakosha kune lactoperoxidase kunyatso uye kune hutachiona hwemukaka hwemweya. Iyo yekuchengetedza uye kutsva kwemukaka inogona chete kuwanikwa kuburikidza nekubatanidzwa kwekupisa kurapwa kwemukaka uye yakanaka hutsanana maitiro akazvimiririra ekushandisa lactoperoxidase.
v. Mamwe mabasa
Zvidzidzo zvakaratidza kuti pamusoro pekunge uine hutachiona hwehutachiona, Lactoperoxidase inokwanisawo kuchengetedza masero emhuka kubva mukukuvara kwakasiyana uye peroxidation, uye zvakare chinhu chakakosha chegadziriro yekudzivirira kubva pathogenic microorganisms muchikamu chekugaya chevacheche vachangozvarwa.
Chii chinonzi Lactoperoxidase System?
Lactoperoxidase system (LPS) yakagadzirwa nezvinhu zvitatu, zvinosanganisira lactoperoxidase, hydrogen peroxide, uye thiocyanate (SCN¯). Iyo Lactoperoxidase system ine anti-bhakitiriya basa chete kana izvi zvitatu zvinhu zvikashanda pamwe. Mukushandiswa kwehupenyu chaihwo, kana kusangana kwechimwe chinhu muchirongwa chisina kukwana, inofanirwa kuwedzerwa kuve nechokwadi chekuti anti-bacterial athari, inozivikanwa seLPS activation. Pakati pavo, lactoperoxidase ndudzi haifaniri kunge iri pasi pe0.02 U / mL.
Iyo yakasikwa lactoperoxidase yakasungirirwa mune bovine mukaka ndeye 1.4 U / mL, inogona kusangana nechido ichi. SCN¯ inowanikwa zvakazara mumasoseji uye matishu emhuka. Mune mukaka, iyo yakasangana ye thiocyanate yakaderera kunge 3-5 μg / mL. Ichi chinhu chinogadzirisa cheLactoperoxidase system chiitiko. Izvo zvakataurwa kuti thiocyanate inodikanwa kumisa iyo lactoperoxidase system iri pedyo ne15 μg / mL kana kutopfuura. Ndokusaka tichifanira kuwedzera iyi exo native thiocyanate kuti ivise lactoperoxidase system. Iyo hydrogen peroxide yezvinhu mumukaka, iyo yakatorwa, inongova 1-2 μg / Ml, uye kumisikidzwa kweLPS kunoda 8-10 μg / mL ye hydrogen peroxide. Ndokusaka hydrogen peroxide ichifanirwa kupihwa kunze.
Iyo lactoperoxidase system inoita basa rakakosha mukati mekudzivirira kwemukati, inogona kuuraya mabhakitiriya mumukaka uye mucosal secretions uye inogona kunge ichirapa.
Muzvikafu uye zvigadzirwa zvehutano hwehutano, kuwedzera kana kuwedzeredza kweiyo lactoperoxidase system dzimwe nguva inogona kushandiswa kudzora hutachiona.
Iyo LPS ine zvekugadzirwa kweanti-bhakitiriya yakakomberedzwa kubva kuSCN¯catalysed neLPO pamberi pehydrogen peroxide. Akadaro lactoperoxidase antimicrobial basa inowanikwa nechero mumvura yakawanda yemuviri senge gastric juice, misodzi, uye mate. Iyo miviri yakakosha nzvimbo yeantimicrobial system, iri hydrogen peroxide uye thiocyanate, iripo mumukaka munzvimbo dzakasiyana, zvichienderana nemhando yemhuka uye chikafu chakapihwa.
Mumukaka mutsva, iyo antimicrobial chiitiko haina kusimba uye inogara kwenguva shoma semaawa maviri sezvo mukaka chete une suboptimal mazinga e hydrogen peroxide uye thiocyanate ion. Thiocyanate inowedzerwa iyo inogadziriswa mune iyo 2 electron reaction inobereka hypothiocyanite
Thiocyanate inoshanda se cofactor yeiyo Lactoperoxidase system. Nekuda kweizvozvo, nhamba yeiyo oxidized sulfhydryls iri yakazara yakazvimirira ye thiocyanate ion sekureba
Ruori kusekwa kunowanikwa
Thiocyanate haina kupera simba
Yakakwana hydrogen peroxide iripo
Thiocyanate haisati yabatanidzwa mune inonhuhwirira amino acid
Nekudaro, thiocyanate inovandudza iyo inopesana nehutachiona maitiro e lactoperoxidase system mumukaka mutsva. Izvi zvinowedzera hupenyu hwefufu hwemukaka mutsva pasi pemamiriro ekunopisa kwemaawa manomwe kusvika masere.
Lactoperoxidase Kuishandisa / Kushandisa
i. Anti-utachiona-chiito Chekuita
Izvo zvinopesana nehutachiona-chiitiko che lactoperoxidase system inoonekwa mu bactericidal uye bacteriostatic chiito chemamwe maorganorganis anowanikwa mukaka yakatsvuka. Iyo bhakitiriyaidal mashandiro ayo anoshanda mune iro thiol boka rinowanikwa pane hutachiona masero 'plasma membrane ari oxidized. Izvi zvinoguma nekuparadza kwemukati membrane membrane inotungamira kuvuza kwepolypeptides, potasium ion, uye amino acids. Kutora kwe purines uye pyrimidines, glucose, uye amino acid nemaseru zvinodzivirirwa. Synthesis yeDNA, RNA, uye mapuroteni zvakare anodzivirirwa.
Mabhakitiriya akasiyana anoratidza madhigirii akasiyana ekunzwa kune lactoperoxidase system. Hutachiona husina hutachiona, seSalmonella, Pseudomonas, uye Escherichia coli, hunodzivirirwa uye hunourawa. Lactic acid mabhakitiriya uye Streptococcus inongodzivirirwa. Kupararira kwehutachiona uhu ne lactoperoxidase system kunokonzeresa kukwenenzvera humwe hutano, zvichitadzisa mabhakitiriya kutora mune zvinovaka muviri, uye izvi zvinotungamira kudzikira kana kufa kwebhakitiriya
ii. Kurapa kweparadentosis, gingivitis, uye kuuraya tumor cell
LPS inofungidzirwa kuti inoshanda pakurapa gingivitis uye paradentosis. LPO yakashandiswa mumuromo rinhisa kutsikisa mabhakitiriya emuromo uye, semhedzisiro, asidhi inogadzirwa nemabhakitiriya aya. Antibody conjugates yeiyo lactoperoxidase system uye glucose oxidase yakaratidza kuve inoshanda mukuparadza uye nokudaro kuuraya tumor cell mu vitro. Zvakare, macrophages akafumurwa kune lactoperoxidase system anogadziriswa kuti aparadze uye auraye cancer cancer.
Zvidzidzo zvakasiyana zvekiriniki zvinotsanangura kushanda kweLPS mune yekurapa mazino zvakanyorwa. Mushure mekuratidzira zvisina kunanga, uchishandisa kuyera kwekuyedza caries mamiriro parameter, iyo lactoperoxidase mazino ekushongedza ane amyloglucosidase (γ-amylase) ane mhedzisiro inobatsira mukutarisira kwemuromo. Enzymes dzakadai seglucose oxidase, lysozyme, uye lactoperoxidase inoendeswa zvakananga kubva mazino kune pellicle.
Kuve nhengo dzepellicle, ma enzymes aya anoshanda zvakanyanya zvinobatsira. Zvakare, iyo LPS ine mugariro unobatsira wekudzivirira kubva kumavambo emari caries nekudzikisa huwandu hwemakoloni ayo anoumbwa neecariogenic microflora sezvo inowedzera kusangana kwe thiocyanate.
Nevarwere ve xerostomia, lactoperoxidase mazino yakanyanya kukwirira kana ichienzaniswa neye fluoride mazino kana zvasvika pakuumbwa kwenzvimbo. Iko kushandiswa kweLPS hakungorambwi kune periodontitis uye caries. Iko kusanganiswa kwe lactoperoxidase uye lysozyme inogona kushandiswa mune inopisa muromo chirwere chekurapa.
Kana LPS ichibatanidzwa ne lactoferrin, iyi yekubatanidza inosangana ne halitosis. Kana LPS ichivhenganiswa ne lysozyme uye lactoferrin, LPS inobatsira mukuvandudza xerostomia zviratidzo. Zvakare, gels dzine lactoperoxidase system inobatsira kugadzirisa zviratidzo zvekenza yemuromo apo kugadzirwa kwemateti kurivhara nekuda kwekudiridza.
Iv. Kukurudzira immune system
Lactoperoxidase antimicrobial basa inoita basa rakakosha mu immune system. Hypothiocyanite chinhu chinogadzirisa chinogadzirwa ne lactoperoxidase chiitiko pane thiocyanate. Hydrogen peroxide inogadzirwa neDuox2 mapuroteni (dual oxidase 2). Thiocyanate secretion mune varwere vane cystic fibrosis inoderedzwa. Izvi zvinoguma nekuderedzwa mukugadzirwa kweantimicrobial hypothiocyanite. Izvi zvinobatsira panjodzi yepamusoro yekutapukirwa nemhepo.
Iyo LPS inhibits helicobacter pylori zvinobudirira. Asi mumunhu wose, LPS inoratidza isina kusimba anti-bhakitiriya. Iyo LPS hairwisi DNA uye haisi mutagenic. Asi, mumamiriro ezvinhu akanyanya, iyo LPS inogona kukonzera kushoma oxidative kusagadzikana. Izvo zvinoratidzwa kuti LPO mu thiocyanate kuvapo kunogona kukonzeresa cytotoxic uye bactericidal mhedzisiro ye hydrogen peroxide pasi pemamwe mamiriro, kusanganisira kana H2O2 iripo mumusanganiswa wekupindirana mukuwedzera thiocyanate.
Uye zvakare, nekuda kwesimba rakasimba uye rinoshanda rekurwisa mabhakitiriya uye nekupisa kwakanyanya kupisa, rinoshandiswa seanorwisa mabhakitiriya ekudzikisa nharaunda dzebhakitiriya mumukaka kana zvigadzirwa zvemukaka uye sechiratidzo chemukaka Ultra-pasteurization. Nekumisikidza lactoperoxidase system, hupenyu hweasherufu hwefriji yakasvibirira mukaka inogoneshwa zvakare.
Uye, iyo hypothiocyanate inogadzirwa lactoperoxidase inogona kushandiswa kudzivirira herpes simplex hutachiona uye hutachiona hwehutachiona hwevanhu.
Kwakachengeteka kune hutano hwevanhu uye hwemhuka?
Makumi gumi nemashanu emafundo emumunda munyika dzichiri kusimukira uye dzakasimukira dzakaitwa pamwe nekuongororwa neFAO / WHO JECFA (Joint Nyanzvi dzeKwayedza pamusoro peChikafu Chokuwedzera). Mushure mekunge idzi dzakadzama uye dzakadzama dzidzo dzapera, kushandiswa kweiyo lactoperoxidase system mukuchengetwa kwemukaka kwakabvumidzwa neFAO / WHO JECFA (Nyanzvi yeDhipatimendi reZvezvekuwedzera Zvekudya). Nyanzvi idzi dzakataurawo nzira iyi seyakachengeteka kune hutano hwevanhu uye hwemhuka.
Iyo LPS inzvimbo yechisikigo yegastric muto uye mashesa muvanhu uye, saka, yakachengeteka kana ichishandiswa mukutevedzera kuCodex Alimentarius Commission's Nhungamiro. Iyi nzira haina chekuita nemhuka inonanzva chero. Izvi zvinodaro nekuti kurapwa kunoitwa chete mushure mekunge mukaka wabviswa mubeche.
Izvo zvinoonekwa kubva mukukurukurirana kwedu kuti lactoperoxidase uye lactoperoxidase system inoshanda kwazvo uye inobatsira kwazvo mune dzakasiyana siyana dzekushandisa. Kana iwe uri kutarisa kuti uite yakakwana lactoperoxidase tenga pakutsvaga kwako kana kugadzirwa kwezvinodhaka, usatarisa mberi. Isu tinokwanisa kugona kurongedza lactoperoxidase yakawanda yakawanda munguva pfupi uye tinokwanisa kuitumira kuUS, Europe, Canada, nedzimwe nzvimbo dzenyika dzinoverengeka. Inzwa wakasununguka kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Jantschko, PG Furtmüller, M. Allegra et al., "Redox inopinda pakati pechirimwa nemamalian peroxidases: kuenzanisa kuchinonoka-kinetic kudzidza kwekuita kwavo kune indole derivatives," Archives of Biochemistry uye Biophysics, vol. 398, kwete. 1, mapeji 12-22, 2002.
Tenovuo JO (1985). "Iyo peroxidase system mumasheni emunhu." Muna Tenovuo JO, Pruitt KM (ed.). Iyo Lactoperoxidase system: kemikari uye kukosha kwoutachiona. New York: Dekker. p. 272.
Thomas EL, Bozman PM, Dzidza DB: Lactoperoxidase: chimiro uye chinobatsira zvinhu. Peroxidases muChemistry uye Biology. Yakarongedzwa na: Everse J, Everse KE, Grisham MB. 1991, Boca Raton, FL. CRC Press, 123-142.
Wijkstrom-Frei C, El-Chemaly S, Ali-Rachedi R, Gerson C, Cobas MA, Forteza R, Salathe M, Conner GE (Nyamavhuvhu 2003). "Lactoperoxidase uye munhu airway host dziviriro". Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 29 (2): 206–12.
Mikola H, Waris M, Tenovuo J: Inhibition ye herpes simplex virus rudzi 1, yekufemedzeka serudzi rwehutachiona, uye echovirus Type 11 neiyo peroxidase-yakagadzirwa hypothiocyanite. Antiviral Res. 1995, 26 (2): 161-171.
Haukioja A, Ihalin R, Loimaranta V, Lenander M, Tenovuo J (Gunyana 2004). "Sensitivity of Helicobacter pylori kune chidziviriro chemukati yekudzivirira, iyo lactoperoxidase system, mune buffer uye mumasese emunhu". Chinyorwa chekurapa Microbiology. 53 (Pt 9): 855-60.
1.Lactoperoxidase pamusoro penyaya
2.Iyo inonzi Lactoperoxidase?
5.Lactoperoxidase Kuishandisa / Kushandisa
6.Kwakachengeteka here kune hutano hwevanhu uye hwemhuka?
Shangke Chemical ibhizimusi repamusoro-soro rinoshandira inoshanda mushonga wepakati (APIs), ine huwandu hukuru hwevashandi vane ruzivo, yekutanga-kirasi zvigadzirwa zvekugadzira uye maLabhoratri kudzora mhando panguva yekugadzira.
Xuchang Fine Chemical Industrial Park, Province of Henan, China